Fampiharana ny vahaolana
Naseho ny : 31 oktobra 2019
Ny fahavanonana dia tsy maintsy miainga amin'ny fanajana ny tenananao aloha no voalohany, avy eo dia mipaka amin'izay manodidina anao izany. (30-10-2019)
Mpamafy fiadanana & fanantenana 
Naseho ny : 2 jolay 2019
Famantarana hita maso maneho ny maha-iray ny finoana ny Papa Ray masina, ao amin'ny Fiangonana katolika. Ambaran'ny ny fampianaran'ny Fiangonana fa dimbin'i Piera Apostoly izy.
Nosoratan'i Randimbisoa Charles Armand
Lohahevitra : Tantsoroka
Naseho ny : 1 jona 2019
Mandritra ny vola jona isika dia manaja manokana ny Fo Masin'i Jesoa. Ilay Fon'i Jesoa, voatrobaky ny lefona tamin'ny zoma masina ; Fo Masina misokatra, mivaivaim-pitiavana, mampitobaka amintsika amin'ny alalan'ny rà sy ny rano, ireo fahasoavana manadio.
Pejy 75 amin'ny 76